Dar-xumida ay ku jiraan darbi-jiifta Maraykanka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dar-xumida ay ku jiraan darbi-jiifta Maraykanka.
Posted by: radio himilo August 9, 2017
Muqdisho – Darbi-jiifnimadu waa mushkilad bulsho oo ka jirta gudaha Maraykanka. Marka loo eego McKinney–Vento Homeless Assistance Act, dadka hoy la’aanta ah waa kuwa la’ gabaad iyo hoyaad joogto ah.
Darbi-jiifnimadu waxay mushkilad qaran noqotay sanadkii 1870. Dib-jir badan ayaa ku nool magaalooyinka soo korayay waagaas sida New York. Xaaladaha sababa kororka dadka hoy la’aanta ah waxaa ugu weynaa gaajada. Hadba in cusub ayaana kusoo biiraysay ilaa iyo maantada la joogo.
Mid kamid ah 50-kii carruur ama 1.5 malyan oo dalka Maraykanka ku nool ayaa sanad kasta noqon doona hoy la’aan. Sanadkii 2013, tiradu waxay hoos ugu dhacay hal cunug 30-kii carruur ama 2.5 milyan.
Waxaa jira tiro lagu qiyaasay 57,849 oo hoy la’aan ah sanadkii 2013-ka, hayeeshe tiradaas waxay ku soctaa xowligii ugu xumaa abid kaas oo burbur dhaqaale ku ah dalweynaha Maraykanka.
Siyaalaha kale ee durjinaya ama dib loogu celiyo badashada darbi-jiifta waxaa ugu weyn shaqa la’aanta, furrriinka – kala tagga qoysaska, isku buuq-maskaxeed ku furma qofka, xanuun maskaxeed, fatahaadaha ‘daadadka iyo burburka’, qamaarka, mushahar-yarida iyo wixii lamid ah.
Los Angeles, Magaalada Malaa’igta, waxaa hadda si kale loogu naanaysaa Caasimadda Dib-jirta Maraykanka. Heysashada sal-dhigga xarunta shirkadda aflaamta ee Hollywood, waxaa dhexdeeda ku nool tiro lagu qiyaasay 44,000 oo hoy la’aan ah kuwaas oo jiifsada jidadka, teendhooyinka, buudooyinka hoostooda iyo meelo kale.
Dowladda hoose ee Los Angeles ayaa sanadkii hore sheegtay inay u baahan tahay $100 milyan si ay ula tacaasho dhibaatooyinka hoy la’aanta kuwaas oo tiradoodu kor u kacday 20%. Badigood waxay ku nool yihiin daanta webiga Los Angeles, waxaana lagu qiyaasay in ka badan 1000 qof.
Dib-jirta ama hoy la’aanta waxay saamaysay qeybo badan oo bulshada Maraykanka kamid ah sida qoysaska, carruurta iyo dadka da’da ah.
Dowladdu waxay isku dayaysaa helidda xal guud oo lagu xakameeyo kororka dadka hoy la’aanta ah. Hayeeshe, aqoon-yahannada ku xeel-dheer culuumta bulshada iyo geyfanayaasha u ol’oleeya arrintan ayaa aaminsan in xalku uu ku jiro in gunta hoose laga dhayo dhibtan – taasina waa in dib loo soo celiyaa aas’aaskii adkaa ee qoyska.
In la adkeeyo tiirarka qoysaska – iyada oo taasi laga dhisayo baahiyaha aas’aasiga u ah nolol-maalmeedka lammaanaha sida; helidda shaqooyin iyo fursado wax-barasho, waxay rumaysan yihin inay badbaadin karto jiilka soo socda ee Maraykanka.
Inaan dib loo abaajin qiimaha iyo ilaalinta gunta mujtamaca – qoysaska, waxay rajada laga qabo xalinta mushkiladda darbi-jiifta kusii ridaysaa ceel salkiisu fog yahay.
Previous: Gary Neville: “Manchester United dab-yar mashidayso xagaagan.”
Next: Degmo gabadhii ku dhalataba loo beero geedo dhan 111 xabo.